I-Wholesale Ebalulekile ye-oli Diffuser, i-Humidifier supply | I -iceEasy
Singles Amafutha Abalulekile
Amafutha Abalulekile Obuningi
Izinti zikawoyela ezibalulekile
Amakhithi Amafutha Abalulekile
Isisabalalisi sikawoyela seNebulizer
Isikhwama Samafutha Esibalulekile
Ilebuli yangasese | Yakha umkhiqizo | Akukho ubuncane
Qalisa ilebula langasese
Imali ekhokhwayo yokusetha ilebula yangasese
Imali ekhokhwayo yokusetha iDropshipping
Ukuhlanganisa shopify oda
* Senza konke ekusithekeni kuyasebenza
* Ugxila ekukhuliseni ibhizinisi lakho
Inani lentengo eliphambili lamafutha abalulekile
SINGAKWAMUKELA KANJANI UKUKHULA IBHIZINISI LAKHO?
Uma ukwazi ukutshala imali engaphezu kwama- $ 500 emkhiqizweni, singasiza ekwenzeni imikhiqizo yakho, senze ngezifiso amaphakeji, futhi sifinyelele namaphupho womkhiqizo wakho.
Singasebenza zonke izidingo zakho ze-ecommerce, kufaka phakathi ilebuli yangasese, izitika ze-FNSKU, ukuthunyelwa ku-Amazon, ukwehla kusuka eChina kubathengisi abathengi.
Njengomthengisi, uzobe unikela ngemikhiqizo efanayo nomncintiswano wakho. Impela, amanani entengo aphansi angakwenza uthandeke, kepha ekugcineni uzonikeza ibhizinisi lakho lingasizi. Ungawabukeli phansi amandla okupakisha ngisho nolula uphawu lomkhiqizo. sakhela ama-fallshippers, amabhizinisi amancane nawo wonke umuntu ophakathi.
Senze "umsebenzi ongcolile" ukuze ukwazi ukugxila ekumaketheni!
Udinga amalebula wangokwezifiso? Sikubambile. Singanikela ngisho nangezinsizakalo zokwakhiwa kobuchwepheshe kanye nemikhiqizo enelebula yangasese yangasese kuma-run amakhulu.
Ikhasi lomkhiqizo le-AromaEasy linikeza uhla olucacile lwamanani lapho abathengisi bezitolo abathengisa izinto ezithile
ungathola okunikezwayo okuhlukile ngokuya ngezidingo zokuthengisa. Siphinde sinikeze ngesevisi ye-inthanethienquiry uma unezidingo ezahlukahlukene zokuhlanganiswa komkhiqizo noma ama-oda amakhulu
Uma unombono womkhiqizo (i-kickstart, crowdfunding), kepha ungazi ukuthi uwukhiqiza kanjani, sikuqondisa igxathu negxathu.
Singanikela ngentengo ephansi, eqenjini labantu abangu-20, nezisombululo eziningi zokusekela ibhizinisi lakho elikhulayo.
Isakhiwo sethu samanani asobala futhi asinazindleko ezifihliwe kuso. Intengo yethu ingenye yokuncintisana kakhulu emhlabeni, futhi ingxenyana nje yalokho abanye abenzi bezimpahla baseMelika noma baseYurophu abavame ukukukhokhisa. ukwakheka kwevolumu ephansi nezidingo zomhlangano. Sizama konke okusemandleni ethu ukonga imali nesikhathi sakho.
Kuyo yonke le minyaka siyaziqhenya ngokuba nokugcina ukulethwa kwezidingo ezenziwa ngesikhathi sama-99%. Ungase ukhethe i-DHL kanye nezinye izinsizakalo zokuhambisa izincwadi ngebhalansi yejubane nesabelomali. Sisebenzisa izinsizakalo kuphela ezivela ezinkampanini ezinokwethenjelwa nezithandekayo.
Amahora angama-24 Service Amakhasimende
Noma nini lapho unezinkinga, ungahlala ufinyelela umuntu osebenzayo wamakhasimende aphendule ukuphendula ama-imeyili noma imilayezo yakho.
Uhlelo Lokuhambisa Ngokuyeka
Ama-oda akho athunyelwe ngqo kwizikhungo zokugcwalisa i-Amazon. Okokuzikhethela kokubekwa ngaphakathi kwendlu nokugoqoza kuyatholakala.
Ikithi kawoyela ebalulekile
Ubuningi bamafutha abalulekile
I-Natura Wooden Diffuser
Isitoreji samafutha esibalulekile
I-3D ingilazi ehlukile
Ividiyo emayelana ne-oli ethengisa izinto ebalulekile
Okuthandwa kakhulu kwe-oli ethengisa yonke into ebalulekile
Okuphezulu okungu-6 - 10ml Amafutha abalulekile e-E128 Essential Oil Aromatherapy Starter Kit
I-Wholesale Chestnut Essential Amafutha Amafutha Amandla X131
Ama-Fireworks ase-Wholesale Abalulekile we-Amafutha Amafutha Amandla X117U
I-Wholesale Ocean Essential Amafutha Diffuser X118
I-Wholesale Shade Essential Amafutha Diffuser X117G1
I-Wholesale Portable Car Essential Oil Diffuser X129 (Amanzi)
I-Wholesale White Essential Amafutha Diffuser X125A (Amanzi)
Isitolo se-Wholesale Gourd Essential Amafutha E-Diffuser X131A
Ngabe Uhlangabezana Nezinkinga Lapho uthenga i-diffuser namafutha abalulekile kuMkhiqizi
Kunzima ukuthola nokukhetha umphakeli onamafutha obalulekile onokwethenjelwa.
Ikhwalithi engalingani yamafutha abalulekile avela kule makethe, Abathengisi abambalwa bangaqinisekisa ubumsulwa kanye nesikhathi sokuphila samafutha abalulekile. Ngaphezu kwalokho, uwoyela obalulekile awekho ngaphansi komthetho we-FDA.
Izikhathi zokuhola ezinde zamafutha abalulekile avela kwabanye abahlinzeki, futhi Isikhathi Sokuhambisa asisiqinisekisiwe.
Bambalwa Abaphakeli Abahlinzeka Ngezixazululo Lapho Ubhekana nezinkinga zezobuchwepheshe nge-diffuser ebalulekile.
Yize abathengisi abaningi bethi banendaba nezinkampani ezincane, iningi alinandaba.
Bambalwa Abaphakeli abanesevisi egcwele enokubaluleka kokokukhiqiza uwoyela, ukukhiqiza, ukuthengisa, ukuthuthukiswa kwebhizinisi, ukuxhaswa kwezobuchwepheshe kanye nensizakalo ethengisa izinto ngemuva.
Kungani Khetha u-Aromaeasy
AMA-OPHESHA AMAKHASI AMAKHULU ASEBENZA NGOKUPHAKATHI ngentengo ethengiswayo Sinenkundla yokucobelelana ngolwazi ehamba phambili kunazo zonke embonini ye-diffuser yaseChina, kanye namafutha abalulekile atholakala emapulazini omhlaba.
Ithimba lethu lokukhiqiza lihambisana ne-UL, ETL, TUV, ISO, KC, IC, SAA, C-Tick, RoHS, FCC, CE & GS amazinga, futhi liphatha abaklami nabasebenzi ukuqinisekisa ikhwalithi.
Kusukela ekuthengweni kwempahla eluhlaza kuya ekukhiqizweni, i-AromaEasy inohlelo oluphelele lokuphatha ngokuhlolwa kwekhwalithi. Sisiza ukukhula kwebhizinisi lakho Siyalikhathalela ibhizinisi lakho!
I-AromaEasy inabasebenzi abasebenza ngochwepheshe ukukunikeza ukuqeqeshwa kwabasebenzi nezinsizakalo zokweluleka kwezobuchwepheshe ukusiza ibhizinisi lakho likhule. Futhi lezi zinsiza mahhala.
Ukukhula kwebhizinisi lethu kususelwa ekukhulelweni kwebhizinisi lakho ekukhuleni kwamaprofessional kanye nokusatshalaliswaSiyaqonda izinsizakalo ezinhle kakhulu zokuhambisa izincwadi ezidingekayo kuhlobo ngalunye nobukhulu bebhizinisi.
I-AromaEasy inokusebenza okuhle nokusatshalaliswa, ukuqinisekisa imikhiqizo yakho ngokulethwa okunembile ngesikhathi. INKONZO YOKUSEKELA KODWA-KUYE-ONE 24/7 KWAKHOIthimba elisebenza ngemuva kokuthengisa livame ukuvakashela nge-inthanethi, ukuphendula ngokushesha kungakapheli amahora angama-24.
Ipulazi Lethu Lomhlaba
I-AromaEasy isebenza nabakhiqizi abathembekile abavela emhlabeni wonke, ukuqinisekisa ikhwalithi yamafutha ethu abalulekile. Lokho kumane nje kuyisiqalo.
Simisa ama-labs kuyo yonke ifektri eyinhloko emazwenikazi ayisithupha, ukuqinisekisa ukuthi wonke amakhasimende athola uwoyela obaluleke kakhulu.
Futhi, siletha izindinganiso zethu eziphakeme kuwo wonke umuntu esisebenza naye, abahola abahlinzeki ukuthuthukisa izindlela zabo ukuze bahambisane nezinga lethu.
Sikunikeza okuhle kakhulu, futhi sizibophezela ukuthi sizokuba ngcono kakhulu kusasa kunathi namuhla.
Ukuthengisa okungcono okuthengisayo okubalulekile okuthengiswa okugcwele okuthengiswayo okuthengiswayo okuthengiswayo okuthengiswa ngokuphelele okuthengiswayo okuthengiswayo okuthengiswa ngokuthenga okuphelele
Dlulisa amehlo kwizigaba zethu
Izikhwama zikawoyela ezibalulekile
100% Amafutha Abalulekile Angahlanzekile
Umugqa wokukhiqiza we-oli ethengisa izinto ezibalulekile esetshenzisiwe
Umugqa wokukhiqizwa we-AromaEasy wamukela ukugeleza kokusebenza, ukuzenzakalela okuphezulu kanye nokusebenza kahle kokukhiqiza.
Umugqa wokukhiqiza ungahlangabezana nevolumu yokuhlukahluka kwephunga elingaphezu kuka-200,000 ngenyanga. Futhi manje sikhiqiza izinhlobo ezi-2 million zephunga ngonyaka kumakhasimende aqhamuka kuwo wonke umhlaba.
I-opharetha ithole ukuqeqeshwa ochwepheshe. Amakhono wokukhiqiza onekhono nekhwalithi ehambelana nekhwalithi enikezela isiqinisekiso esithembekile sokukhiqizwa kwekhwalithi ephezulu nekhwalithi engabizi kakhulu.
Indawo yokukhiqiza yale nkampani iphethwe ngokuqinile ngokubalulwa kwe-5S ukuqinisekisa ukuhlanzeka, ukuhleleka, ukusebenza kahle nokuphepha kohlelo lokusebenzela.
Ozakwethu Kufanele Sibonge
Okokuqala ukubhekana ne-AromaEasy. Umthengisi othembeke kakhulu nokuthumela okuthembekile nokusheshayo e-USA. Yonke imibuzo iphendulwe ngokushesha. Sizothenga kusuka ku -onyoEasy futhi! Inhlanhla !.
Ukuthenga nge-AromaEasy kusebenza kahle futhi kushesha. Ngisho nomshuwalense wokuhamba nokulandela insiza ufakiwe.
Ngiyabonga, lesi isikhathi sethu sokuqala ukusebenzisa i-AromaEasy ekuthengweni kwewebhusayithi, ngenqubomgomo yakho yokuqinisekisa, sizizwa siphephile futhi sithembela ngezinsizakalo zakho. Sizoqhubeka kulokhu kuthenga ngokuzayo.
isisusa amafutha abalulekile
Ngiyakuthanda ukusebenzisa i -onyoeasy ukuthola imikhiqizo yami. bayizinto ezisezingeni eliphakeme futhi abathengisi kulula ukusebenza nabo futhi bahlangabezana nokulindelwe kwami ​​okuphezulu. Futhi, ukulandelela amaphakheji ami kusiza ukusetha okulindelwe engikuthola kokuthola izinto ezithunyelwa e-USA.
I -onyoEasy® ikunikeza imikhiqizo engcono kakhulu ye-aromatherapy ukusekela ubuhle bakho.
I-AromaEasy ineminyaka engaphezu kwengu-12 yesipiliyoni embonini ye-aroma diffuser. Sinikezela ngama-diffuser namafutha abalulekile ngamanani eshibhile, okuholela abanye abahlinzeki. Futhi amafutha ethu abalulekile kawoyela athengiswa emhlabeni wonke ngesilinganiso sezigidi eziyi-130 ngonyaka. Ngemuva kweminyaka yentuthuko, i-AromaEasy ibisesikhundleni esiphambili ku-R & D phakathi kwamabhizinisi ebhizinisi elifanayo. Sakha izinhlobo ezintsha ezingama-30 zephunga elimnandi minyaka yonke futhi sikunikeza insizakalo eyenziwe ngezifiso.
Mayelana nohlelo lwethu Lokulawulwa Kwekhwalithi
I-AromaEasy ithole uchungechunge lwezitifiketi ezifana ne-ISO9001, ISO14001, BSCI, ne-OHSAS18001. I-Eyesential Oils ngayinye ye-AromaEasy idlula ekuhlolweni okunzima ukuze iqinisekise ukuthi zifakwa emgqonyeni wakho ngendlela emsulwa, ukuletha ekhaya lakho ngaphandle kokugcola, amakhemikhali angeziwe noma okokuhlanza. Kusukela ekuqaleni, i-AromaEasy ilwela ukuletha impilo enhle nenjabulo ezimpilweni zalokhu okuthinta.
Mayelana nobuchwepheshe bethu bamuva
I-AromaEasy ihlinzeka ngama-oyela abalulekile nama-diffusers kuma-70,000+ abathengisi abakhulu, ama-salon namahhotela eNyakatho Melika. Silalela impendulo yabasebenzisi bokugcina bese siletha imibono emisha, okwenza izimpilo zakho zibe ngcono.
I-Aroma diffuser holder carousel, aromatherapy kits, i-stylish ceramic diffusers enobuchule be-Bluetooth®, i-nebulizing diffusers, kanye ne-wireless car diffusers izibonelo ezimbalwa nje zokwephulwa kwe-AromaEasy ™ okwambulelwe umhlaba. Umsebenzi wethu umayelana nokubeka amazinga aphezulu ukuze sikwazi ukwenza umhlaba ube indawo engcono.
Khulisa ukubuyisa kwakho ekutshalweni kwemali ngokubambisana kwe-AromaEasy noma ukubambisana okuhlobene. Lapha ku-AromaEasy
DALA i-ACCOUNT EMAHHALA
Izinzuzo eziyi-12 + ze-Frankincense Essential Oil and Its Use Extensive
izinhlaka zempepho ezibalulekile zikawoyela Amafutha abalulekile asetshenziselwe izinkulungwane zeminyaka ukuthola kwawo [...]
Ungayenza Kanjani I-Sanitizer Yesandla Ekhaya
ungayenza kanjani i-sanitizer yezandla
Amafutha abalulekile ama-Blisters
Nawu umhlahlandlela omfushane we-AromaEasy kuma-Essential Oils for Blisters Blisters ungacasula kakhulu [...]
Amafutha abalulekile we-Back Pain
Amafutha abalulekile we-Back Pain Ucwaningo lukhombisa ukuthi cishe amaphesenti angama-80 amaMelika ahlangabezana [...]
Amafutha Abalulekile Ongokomoya
Amafutha abalulekile avela ezitshalweni abelokhu edlala indima emicimbini yokomoya, esiza abantu ukuthi bahlale [...]
Amafutha abalulekile okubulala amagciwane
Nawu umhlahlandlela omfushane we-AromaEasy wamafutha abalulekile okubulala amagciwane Ngalezi zikhathi ezinzima, [...]
Ungayisebenzisa Kanjani Amafutha Abalulekile ku-Shower
Lokhu okuthunyelwe umhlahlandlela wokugcina we-AromaEasy wokuthi ungawasebenzisa kanjani amafutha abalulekile eshaweni. [...]
Amafutha abalulekile wokugcinwa kwamanzi
Lokhu okuthunyelwe kuyisiqondiso ekukhetheni uwoyela obalulekile wekhambi lemvelo lamanzi [...]
Amabhizinisi emhlabeni wonke athembela
AromaEasy ukwakha imikhiqizo yabo
Ucingo / WhatsApp / SMS / Skype:
UMUZI WEZIMBONI CA 91745
Imithetho yenkontileka engakhethi
Isibopho somhlaba jikelele
Ayikho inqubomgomo yesipho
Bhalisela ukuba ngowokuqala ukwazi mayelana nokufika okusha kwe-AMAZING, ukuthengisa nokuningi!
Copyright © 2022 I -onyoeasy